Usebenzisa i-aloe vera - Zonke izinzuzo zomzimba wethu | Bezzia
Ungayisebenzisa kanjani i-aloe vera
USusana godoy | 21/07/2021 12:00 | Ubuhle
Ngabe uyakwazi ukusebenzisa i-aloe vera? Yebo, kuliqiniso ukuthi sibhekene nesinye sezitshalo zenkanyezi ebuhleni futhi akuyona into engaphansi. Kepha namuhla kufanele ubhale phansi okunye ukusetshenziswa okuningi okudingeka ukwazi. Ngoba hhayi ubuhle kuphela obuzohlomula kubo kepha kukhona nabanye okudingeka ubazi.
Ngakho-ke, lapho sisho ukuthi sibhekene nesinye sezitshalo ezikhetheke kakhulu, kuyiqiniso ngokuphelele. Ngoba isebenzisa okuningi, yize kuyiqiniso ukuthi abanye bazokwaziwa kangcono kunabanye. Yingakho sidinga ukujabulela konke okusinikeza khona, okuyinto engeyona into encane. Ngabe ufuna ukuthola manje?
1 I-aloe vera ngobuhle
2 Ungayisebenzisa kanjani i-aloe vera ngokumelene nokugaya ukudla
3 Yehlisa ukuvuvukala kusuka ku-sprain
4 Yehlisa uqweqwe lwamazinyo
5 Sala kahle emilenzeni ekhathele
6 Shiya izimpawu zokuguga ngemuva
I-aloe vera ngobuhle
Mhlawumbe ngumhlaba wobuhle lapho sithola ukusetshenziswa okuningi kunakuqala kwe-aloe vera. Ngoba izokwenza cishe yonke into oyifunayo ngisho nangaphezulu. Awukholwa? Manje manje sikutshela ukusetshenziswa okunconyelwe kakhulu komkhiqizo onjengalona.
I-hydration enkulu esikhunjeni sakho: Isikhumba sidinga ukubukeka sibushelelezi futhi singabambi kahle, ngakho-ke umkhiqizo ofana nalona uzosinika wonke umfutho we-hydration.
Ngokuba ukuhlanza ubuso Kuphelele futhi ngoba ukuhlanza kuzojula kepha kuzophinda kunikeze isikhumba amanzi.
Ukushiswa kwesikhumba kubalulekile kodwa nokoboya. Ngakho-ke, sibheja ekusebenziseni okuncane kwaleli gel ezinweleni futhi silivumele liphumule imizuzu embalwa bese sibona ukuthi lihlala lithambe kanjani. Kepha futhi ukuthi nayo ilwa nenkwethu.
Uma une izindebe ezomile, kufanele uhlikihle uginindela walo omncane futhi uzothola imiphumela emihle.
Ukwehlisa izimpawu zokunwebeka, kufanele ubhonce indawo leyo ngobumnene ukuze ubuyise ukunwebeka esikhunjeni.
Ungayisebenzisa kanjani i-aloe vera ngokumelene nokugaya ukudla
Al unezinto ezilwa nokuvuvukala nezokuhlanzaIzophinda iphelele ukusetshenziswa ekulweni nokugaya ukudla. Njalo kufanele uyithathe ngokulinganisela, kepha uma uhlanganisa ama-gramu angama-500 we-aloe vera, nekhukhamba elincane, ujusi kalamula kanye nengcosana ye-parsley, uzoba nenhlanganisela ephelele yokwenza isisu sakho sizizwe silula kakhulu.
Yehlisa ukuvuvukala kusuka ku-sprain
Kuyiqiniso ukuthi lapho sine-strain noma i-sprain, kufanele sithintane nodokotela wethu. Kepha ngaphezu kwalokho, kufanele wazi ukuthi i-aloe vera futhi ingesinye sezithako eziyisisekelo zokulwa nale nkinga. Ngoba iphikisana nokuvuvukala. Ngakho-ke ungenza ukusikhipha umzimba noma usebenzise umkhiqizo omncane futhi ubhandishe indawo ukuze wenze umphumela oyifunayo ube ngcono kakhulu. Usuzamile okwamanje?
Yehlisa uqweqwe lwamazinyo
Uma unanoma yiluphi uhlobo lwenkinga yokutheleleka emlonyeni wakho, lapho-ke ungasebenzisa i-aloe vera ukuyilwa nayo. Ngoba futhi sikhuluma ngokutheleleka futhi kuzonakekelwa kuphulukiswe nge-aloe vera encane kanye namanzi. Sihlanganisa konke kahle futhi kufanele sihlanze ngale nhlanganisela. Uzobona ukuthi, ngaphezu kokunciphisa uqweqwe lwamazinyo, uzothi ukuvalelisa ezifweni ongaba nazo emlonyeni wakho. Eqinisweni, lokhu kugeza nakho kuhle ngokumelene nomlomo onukayo.
Sala kahle emilenzeni ekhathele
I-Las imilenze ekhathele Bazophinde bazizwe beduduzekile ngokubhucungwa ngesithako sethu senkanyezi. Ukuze wenze lokhu, kufanele ubeke kuqala esiqandisini bese, uzobhucunga yonke indawo ebuhlungu. Zama ukukwenza kube ukusikhipha okuthobekile kepha okuhamba kancane ukuze kusebenze ukusakazwa njengoba sidinga.
Shiya izimpawu zokuguga ngemuva
Sibuyela ekunakekelweni kwesikhumba kepha umcimbi uyakudinga lokho. Ngoba kulokhu, imibimbi yokuqala izonikeza abanye ijule kakhulu ngokuhamba kwesikhathi. Ngakho-ke, kufanele ngaso sonke isikhathi sinakekele ngokweqile ukuzama ukumisa, ngangokunokwenzeka, lokhu kuguga. Ngakho-ke, ukusikhipha ngaleli jel kusebenze ukukhiqizwa kwe-collagen futhi umphumela uzoba isikhumba esibushelelezi. Uke wazama noma iyiphi yalezi zindlela?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Ungayisebenzisa kanjani i-aloe vera
Iziphakamiso ezintsha zebhishi leWomen'Secret
Amadolobha asogwini lwase-Asturian okufanele uwavakashele